Archives des Faits-Divers - Page 1511 sur 1512
Manja: Pôlisy notafihan’ny dahalo 80 isa
webmaster 18 novembre 2013 Dahalo, Manja
Velona ary tsaboina ao amin’ny hopitaliben’i Toliara nanomboka ny sabotsy teo ilay pôlisy izay voalaza fa matin’ny dahalo. Ny tongony no tapaka rehefa nilatsaka tao anaty lavaka nandritra ny fitsoahany. Dahalo maherin’ny 80 lahy, nanao fanamiana miaramila ny sasany, nitondra basy « kalach 4» ary « Mas 36 », no nifanandrina taminy nandritra ny adiny enina latsaka, tao amin’ny…
Ambohimirary: Sortie de route d’un taxi-be : huit blessés
webmaster 18 novembre 2013 Ambohimirary, Ambohirary, Andraisoro, Football, Hjra, Tsaralalàna
Un véhicule qui sert de transport en commun, un taxi-be, a fait une sortie de route pour terminer sa course dans un ravin. La voiture a terminé les deux roues en l’air et blessant huit personnes dont six passagers, le conducteur et le receveur. Elle assure la ligne 178 qui relie le centre ville à…
Vidin-drano lafo: Misy misotro ranom-potaka ao Toliara
webmaster 18 novembre 2013 lafo, Toliara, Vidindrano
Betsaka ny mponina ao Toliara sy ny manodidina no velon-taraina manoloana ny fahalafosan’ny rano miainga avy amin’ny orinasam-panjakana tokana Jirama. Ny any amin’ireo toerana somary mihataka ny renivohitra dia betsaka ny tokantrano misotro rano maloto tsy ara-pahasalamana avy amina vovo, miharitra sy ranom-potaka miandrona amin’ireny toerana iva mora ahazoan-drano ireny, amin’izao andro mafana izao. «…
Marais Masay Fatin-jaza kambana hita tao anaty “sachet”
webmaster 18 novembre 2013 Fatin-jaza, Marais Masay
Olona sendra nandalo no nahita ilay fonosana nipetraka teo amoron-drano. Mpitondra môtô sendra nandalo teny amin’ny toerana iny no nahatsikaritra an’izany voalohany, omaly tolakandro. Tsiravina ireo nahita ny tao anatiny : fatin-jaza roa, kambana raha araka ny fitantarany, no indray hita tao. Nampanatsoina ny BMH izay tonga teo an-toerana naka ireo razana. Raha ny fanazavan’izy…
# Iavoloha, fanafihana tsy tontosa. Tonga ara-potoana ny mpitandro ny filaminana rehefa nantsoin’ny mponina ao amin’ny tompon’ny trano iray izay saika hotafihan’ny jiolahy, ny alin’ny asabotsy hifoha alahady teo. Efa nopoirin’ireo olon-dratsy ny varavarana no tonga ireo mpitandro ny filaminana. Rifatra nitsoaka ary tsy nisy azo. # Faratsiho, mpitoto vary voatafika. Telo lahy mitam-basy no…
Fivadiham-pitokisana: Sinoa iray naiditra am-ponja
webmaster 16 novembre 2013 Fivadiham-pitokisana, Sinoa
Naharay fitoriana teratany Sinoa iray ny Polisy avy ao amin’ny Faritany Ambohidahy ny volana oktobra 2013 lasa teo mahakasika fisolokiana sy fivadiham-pitokisana. Ny volana aprily 2013 dia nindrana “Groupe éléctrogène” iray tamin’ny namany ny lehilahy teratany sinoa iray antsoina hoe “Yong Yu Hai”, izay mitentina 27 millions d’Ariary. Nilaza ity farany fa handeha ho any…
Ambatondrazaka: Mpianatra miisa 45 nampijaliana, naratra avy izy ireo
webmaster 16 novembre 2013 Ambatondrazaka, DREN, EPP
Tsy nanaiky ny fampijaliana natao tamin’ireto mpianatra tao amin’ny EPP Marianina Ambatondrazaka ny rayamandreny sy ny tompon’andraikitra ka nametraka fitarainana tany amin’ny foiben’ny mponina aty Ambatondrazaka, nampanantsoina ihany koa ny avy tao amin’ny DREN. Mpianatra miisa 45 ireto nampijalian’ny mpampianatra azy ireto , nasaina nadohalika ary novelesina tamin’ny hazo vaventy iray, naratra avokoa ny lohalik’ireto…
Fanolanana sy fanendahana: Tratra i Banga sy namany roalahy, jiolahy ikoizana
webmaster 16 novembre 2013 fanendahana, Fanolanana
Naharay fitarainan’olona maro be amin’ny asa fanendahana sy sinto-mahery ary famakiana fiara eny amin’ny “Parking” ny Polisy ao amin’ny Faritany Ambohidahy. Ny faritra Besarety, Ampandrana, Rond Point Ambanidia ary Ambohitsoa iny no tena fanaovan’ireo olon-dratsy ny asa ratsiny. Ny 03 novambra lasa teo dia mpianatra iray no voaendaky ny telo lahy teny Ampandrana Besarety, akaikin’ny…
Toliara: Halatra tao amin’ny oniversite, olona 7 naiditra am-ponja
webmaster 16 novembre 2013 Halatra, oniversite, Toliara
Ny alarobia teo no nivoaka ny didy raha ny alatsinainy no natolotry ny polisy nisahana ny fanadihadiana ny fitsarana ireo olona 10 voarohirohy tamin’ny fandrobana ny fitahirizam-bola ka nahavery ny vola iray miliara tao amin’ny oniversiten’i Toliara, ny alin’ny 23 oktobra lasa teo. Olona fito no naiditra am-ponja vonjimaika ka mpiasan’ny oniversite ny efatra, anisan’izany…
← Précédente 1 … 1 510 1 511 1 512 Prochain &arr;